DDoS Attack - Ndị ọkachamara na Semalt na-akọwa Otu esi echebe onye ọrụ gị
Nchedo weebụ aghọwo nsogbu dị egwu maka webmasters n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Nke a bụ n'ihi yaka egwu nke mwakpo hacking mere site na ndị omempụ cyber. Otu n'ime isi nchegbu nke onye ọ bụla webmaster bụ Distributed Denial-of-Service(DDoS) - vps servers unlimited bandwidth.
Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọkachamara ,Andrew Dyhan, na-enye ihe ọmụma banyere ihe dị mkpa nke DDoS ọgụ iji nyere gị aka ịkwụsị ndị na-agba ọsọ na ịkụda ihe nkesa.
DDoS bụ otu ụdị ọgụ nke webmasters chere. N'ebe kachasị elu, ọgụ ahụezubere iji nwayọọ nwayọọ kwụsị saịtị gị, ma ọ na - ebute saịtị gị ma na - eme ka ndị ọbịa ghara ịgafe.
N'ihe gbasara DDoS wakporo megide ngwa weebụ, ngwanrọ ahụ na-akawanyendị na-eme mkpọtụ na-ebugharị ya. N'ihi ya, ngwa ahụ enweghị ike iji akwụkwọ weebụ achọrọ dị mma.
Iji mee ka ihe nkesa na-agba ọsọ ngwa ka ọ daa, otu mmegide DDoS kwuru ihe ndị a:
Mpaghara diski ike
Ebe nchekwa nchekwa
Nchịkọta njikwa usoro
ọdọ mmiri njikọ
DDoS ọgụ megide ngwa weebụ gụnyere:
1. Ikwusa ngwa nchekwa data site na ịmepụta CPU-kpụ ọkụ n'ọnụ ajụjụ.
2. Ịgbaghasị ọrụ na onye ma ọ bụ usoro gụnyere igbochi onye ọrụ siịbanye na saịtị ahụ site na mgbalị nbanye nbanye nke na-eme ka mkpofu nke akaụntụ ahụ..
3. Ngwa weebụ na-ekpo ọkụ n'ime mgbalị iji gbochie okporo ụzọ nkịtị ka ị banye na saịtị ahụ.
Mwakpo DDoS aghọwo usoro nke oke maka ndị na-agba ọsọ n'ihi na ha fọrọ nke ntaenweghi ike ikpuchi megide, dị ala iji gbuo ma metụta ọtụtụ ndị ọrụ. Imirikiti oge, ihe niile ọkachamara hacker mkpa bụ ezigbo ihe onwunwena onye na-enweghị ike ịchọta saịtị na-anọghị n'ịntanetị.
Olee otú mwakpo ndị a si arụ ọrụ?
DDoS ọgụ na-amalite site na otu onye nlekota oru ma ọ bụ ọtụtụ hackers ịtọlite ​​usoro nkeusoro bot. Onye nlekota oru na-enye onye ọ bụla bots iwu ịkwọ ụgbọala gaa n'otu saịtị na-aga n'ihu ma n'otu ogenrụgide na ihe nkesa nke saịtị.
Ọ bụrụ na usoro bot nwere nnukwu netwọk, nrụgide na ihe nkesa nwere ike iwetasaịtị na ala. Ọ bụ ezie na ọgụ ndị a apụtaghị na ị na-ekpughe ozi nkeonwe ma jiri ya tụnyere usoro egwu ndị ọzọ, ha ka nwere nsogbuenwe mmetụta na ụlọ ọrụ ndị na-adabere na ọgụgụ na ịntanetị ahịa. Nbudata DDoS nwere ike iji ego karịa $ 500,000.
Mwakpo ndị a na-ebute ikike nke imebi aha nke ika na inyeechiche na-ezighị ezi nye ndị ọrụ. Mgbe ndị ahịa na-eme ihe, ha na-enye ndị na-asọ gị asọ ihu site na-enyere ha aka ịmalite ike,Ahịa ahịa a ma ama jiri ya tụnyere ụdị gị yiri nke a na-apụghị ịdabere na ya. N'ọnọdụ ụfọdụ, ndị omempụ cyber na-eyi egwu webmasters iji nọgidena-akpaghasị ọrụ ruo mgbe ha nwetara ego a kapịrị ọnụ.
Tụkwasị na nke ahụ, data nwere ike ịnakọta site nchịkọta DDoS site na ndị omempụ iji wakpoona ebe nrụọrụ weebụ n'ọdịnihu. Dị ka ọ dị, ọgụ ndị na-esochi bụ ihe dị mfe ma na-eme mgbe ndị mmegide ghọtara na saịtị ahụ dị nnọọ mfenke na - eme ka ọ bụrụ ihe dị mfe maka ịwakpo mgbagwoju anya n'ọdịnihu.
Ọ bụ ezie na ọgụ DDoS siri ike igbochi, enwere ike ijikwa ha site na saịtị SiteLockusoro nchekwa. Ihe ngwọta dị na saịtị Site nchebe SiteLock nwere ike ịmata na ịchekwa okporo ụzọ na-enweghị isibots si na-abanye na saịtị gi n'enweghi ike igbochi okporo ụzọ.
SiteLobo Nchedo SiteLock chebe ulo oru si na otutu obimmegide gụnyere ụdị nke DDoS sophisticated site na iji Nchedo Ntanetị, DNS na Nchedo Akụrụngwa kachasịakụkụ dị mkpa nke nchekwa DDoS.